प्रचण्डलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न एमालेको प्रस्ताव – Sadhaiko Khabar
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ०७, २०७९ समय: ११:०८:४७
काठमाडौं, ७ जेठ / स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ । यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । दोस्रोमा एमाले र तेस्रोमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको पूरा परिणाम नआउँदै सत्ता गठबन्धन भ’त्किन लागेको चर्चा पनि सुरु भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भने अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको चर्चा पनि चलेको छ। एमालेको नेतृत्व तहबाट नै दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको माओवादी केन्द्रनिकट उच्च स्रोतको दाबी छ । तर, दाहालले भने एमाले नेतृत्वलाई आफू प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि अहिलेको गठबन्धन तो’ड्ने पक्षमा नरहेको जवाफ दिएका छन् ।
उनले पाँच दलीय गठबन्धन भत्काउनको लागि अहिले षड्यन्त्र भैरहेको पनि टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु नहुँदै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले पनि दाहाललाई यो गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन ? कतै कांग्रेसलाई धो’का दिने हो कि ? भन्दै गठबन्धनको भविष्यबारे सुनिश्चितता खोजेका थिए ।
भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभामा कांग्रेसका नेताहरुले दाहालसामू यस्तो प्रश्न गरेका थिए । त्यतिखेर पनि दाहालले आफू गठबन्धनप्रति ईमानदार बनेको भन्दै विश्वास गर्न आग्रह गरेका थिए । अहिले एमाले नेतृत्वबाट दाहाललाई संघको चुनाव गराउनेगरि प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएपनि दाहाल भने गठबन्धन तो’डेर त्यस्तो प्रस्ताव स्विकार गर्ने पक्षमा छैनन् ।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा तीनै तहको निर्वाचन हुने दा’बी गर्दै आएका छन् । हालै पत्रकार ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्तामा पनि दाहालले यही दा’बी गरेका थिए । – रिपोर्टर्स नेपाल बाट ।